Indlela yokwenza uninzi kakhulu kwishishini lam kunye nezixhobo ze-SEO kunye neengcebiso?
Le mihla, inani elikhulu leenkampani liqonda umgaqo-siseko we-injini ye-injini kunye nezinto zayo ezizodwa. Nangona kunjalo, akubona bonke bayazi indlela yokusebenzisa i-SEO ngempumelelo. Xa kuziwa ekwakheni isicwangciso se-SEO esiphumeleleyo, abathengisi abaninzi be-intanethi abazi ukuba baqale kuphi. Njengoko impumelelo yokuphucula injini yenkxininci kuxhomekeke ekusebenzeni ngokufanelekileyo, kufuneka ukwazi ezinye iindawo eziza kukunceda ukuba ufake imibono yakho ye-SEO into - pajarita negra dibujo.
Ukwenza i-SEO esebenzayo, kufuneka ube yinkqubela ngokucacileyo ngemisebenzi ekhoyo. Ukuba uqhubeka wenza incwadana ngaphandle kwesicwangciso esikuyo, awuyi kukwazi ukungena ngokujulile kwi-digital sphere. Yingakho kufuneka uxabise amathuluzi axhasayo kunye neempendulo. Kule nqaku, siza kujongwa ngokukhawuleza kwizixhobo zokusebenza ze-SEO kunye neengcebiso ezingakunceda ukuba ukwandise ukuveliswa kwemveliso yakho.
I-Google Analytics Isongezelelo seSpreadsheet
Ukuze ukwazi ukusebenza ngokufanelekileyo, kufuneka wenze i-Google Analytics yedatha ngokukhipha kunye neengxelo ngokuzenzekelayo. Abanikazi bewebhusayithi, kunye neengcali ze-SEO, ziqhuba rhoqo iingxelo zenyanga. Ngomnye wemisebenzi ephindaphindiweyo edla ixesha elide. Ngokuqhelekileyo, iingcali zichitha usuku okanye ngaphezulu ukuba zikhuphe zonke iinkcukacha ezifunwa kwi-Google Analytics.
Kufuneka baqikelele kakhulu xa bethupha idatha yokuhlalutya njengempazamo kwiingxelo zokuhlalutya zingababiza i-website idumela. Yingakho ii-webmasters zihlala zihlola iingqamathelo ezisetyenziswayo kunye neemetriki abazihlalutyo. Kukulungele ukuzenzekelayo le nxalenye yomsebenzi njengoko kuya kunceda ukuba ulondoloze ixesha elide ukuphelisa iimpazamo kwiingxelo. Kukho konke, iingxelo zakho zokuhlalutya zingathathwa kwinqanaba elilandelayo nge-Google Analytics Added-On kwiSpredishithi. Ngokungongeza ukongezwa okuncedo kwiGoogle Analytics yakho, uya kukwazi ukutsala idatha ngqo kwi-Google Analytics API. Kwinqanaba lokuqala, kuya kufuneka uqwalasele ukuba yeyiphi idatha yokuhlalutya ekufuneka idibanise. Kwinqanaba lesibini, unako ukuqhuba ingxelo ngokuzenzekelayo. Esi sikhokelo sokunika ingxelo sinokukunceda ukunciphisa ixesha ekuqokeleleleni idatha esuka kwi-GA ngokuphawulekayo.
I-Semalt Auto SEO
Nayiphi na isicwangciso sokwenza uphando lweenjini zokusesha singakuphepha inkqubo yokuphanda ngegama elingundoqo. Njengoko umgangatho kunye nemigangatho yokukhangela efanelekileyo ingundoqo kwiphankaso yokulungiselela, kufuneka uqhube uphando olunzulu lwe-market niche kunye nohlalutyo lokuncintisana. Ukwenza lula le nkqubo kwaye uphakamise umgangatho wemigca ebalulekileyo ekujoliswe kuyo, kufuneka usebenzise izixhobo zophando eziphambili zegama elingundoqo njenge-Google Keyword Planner kunye ne-Semalt Auto SEO. Ookugqibela unokukunceda ukuba uhlalutye ngokuzenzekelayo uhlalutyo lwewebhusayithi ukuphelisa zonke iiposiso ezikhoyo. Ukongezelela, esi sixhobo sinika ithuba lokukhetha owona mkhulu ophezulu kunye nefanelekileyo kwiibakala eziphambili zoshishino ngokusekelwe kuhlalutyo lwenkcazelo yakho.
Ukulinganisa i-SEO ngokuzenzekelayo izixhobo ezinobungane kakhulu, kwaye kuthatha imizuzu embalwa ukujonga indlela le nkqubo isebenza ngayo. Ngokukhawuleza xa ubhalisa kwinkqubo, i-analyzer yewebhusayithi iya kunika ingxelo emfutshane malunga neencwadana zeewebhusayithi kunye nemigangatho ye-injini ekhoyo. Emva koko, inkqubo iya kukunika uluhlu lweephutha ezikhoyo kwiwebhusayithi yakho. Okwangoku, i-SEO-injini iya kwenza uluhlu lwamagama akwi-traffic-generating and relevant to help you target your customers potential. Ezi zixhobo zibonelela ngolwakhiwo lwezityalo zendalo kwiiwebhusayithi ezihlobene niche. Iza kunye nesizukulwana esiqulathekileyo esiqulathekileyo esiyinkimbinkimbi sibonelela ngempumelelo. Isakhiwo sokuqhagamshelana senziwa ngokuthe ngcembe ngokwemilinganiselo: 40% - izikhonkwane ze-anchor, i-50% - izikhonkwane ezingekho kwi-anchor kunye ne-10%.